နာမည်ကျော် အနုပညာရှင်တွေကလည်း လူတွေထဲက လူတွေပဲမို့ ချစ်တတ်၊ မုန်းတတ်ကြတာ အမှန်ပါ။ အဲဒီတော့ မေတ္တာတရားတွေ၊ အငြိုးအတေးတွေဟာလည်း သူတို့တွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ ရှိသင့်သလောက်တော့ ရှိကြမှာ အမှန်ပါပဲ။
အမေရိကန်က ထိပ်တန်း အမျိုးသမီးအဆိုတော် တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Taylor Swift နဲ့ နာမည်ကျော် မော်ဒယ်လ်/ တီဗီစတား တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Kim Kardashian တို့ဟာလည်း အဲဒီလိုပါပဲ။ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ကြားမှာ ဟိုးအရင်တုန်းက ရန်ငြိုးရန်စတွေ ရှိခဲ့ကြဖူးတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ပေါ့လေ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းထဲမှာတုန်းကတော့ အသက် ၃၈ နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Kim ဟာ Taylor နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူမရဲ့ ရင်ထဲမှာ ရှိနေခဲ့တဲ့ ခံစားချက်တွေကို နာမည်ကျော် တီဗီအစီအစဉ် တစ်ခုမှာ လူသိရှင်ကြား ထုတ်ဖော် ပြောပြသွားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဲဒီအစီအစဉ်ကတော့ Andy Cohen ရဲ့ Watch What Happens Live ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Kim ဟာ အဲဒီအစီအစဉ်မှာ Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian စတဲ့ သူမရဲ့ ညီအစ်မနှစ်ယောက်နဲ့အတူ Andy ရဲ့ အင်တာဗျူး မေးခွန်းတွေကို ဖြေရင်း Taylor နဲ့ သူမတို့ရဲ့ကြားက ရန်ငြိုးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခုလိုတွေ ဖြေခဲ့တာပဲ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
“အဲဒါတွေဟာ ပြီးသွားပါပြီရှင့်။ Taylor နဲ့ ကျွန်မနဲ့တော့ အဆက်အသွယ်တွေ မရှိကြပေမယ့် အဲဒီကိစ္စတွေ အားလုံးဟာ လုံးဝ ပြီးသွားပြီလို့ ကျွန်မ ခံစားနေရပါတယ် ”
” တကယ်လို့များ ဓာတ်လှေကားထဲမှာ ပိတ်မိနေရရင်တောင် Taylor နဲ့ပဲ ပိတ်မိချင်ပါတယ်။ Drake နဲ့တော့ အတူပိတ်မမိချင်ပါဘူး”
Drake ဆိုတာကတော့ Kim ရဲ့ ခင်ပွန်းသည်ဖြစ်တဲ့ Rapper ကြီး Kanye West နဲ့ ရန်ငြိုးရန်စ ရှိနေတဲ့ Rapper တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ အစီအစဉ်ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းတစ်ရက်မှာတော့ အသက် ၃၈ နှစ်အရွယ် ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Kim ဟာ သူမရဲ့ Snapchat က Story မှာ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ခုကို တင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာ Kim နားထောင်နေခဲ့တဲ့ သီချင်းလေးကလည်း Delicate ဆိုတဲ့ Taylor ရဲ့ နာမည်ကျော် သီချင်းတစ်ပုဒ်ပဲ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပြန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Taylor အပေါ်မှာထားတဲ့ Kim ရဲ့ သဘောထားက တကယ့်ကို စစ်ပြေငြိမ်းချင်နေတဲ့ အနေအထားမျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Taylor နဲ့ Kim တို့တွေရဲ့ ရန်ငြိုးအစကတော့ ၂၀၁၆ ခုမှာ စတင်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက Kim ရဲ့ ခင်ပွန်းသည်ဖြစ်တဲ့ Kanye West ဟာ Taylor အတူပူးပေါင်းပြီး Famous ဆိုတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ဖန်တီးနေခဲ့တဲ့ အချိန်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သီချင်းက တရားဝင် မထွက်သေးခင်မှာ Kim ကြောင့် အွန်လိုင်းပေါ်ကို ရောက်သွားခဲ့ရတဲ့ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး Taylor နဲ့ စကွိုင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
The feud between Taylor Swift and Kim Kardashian is over, isn't it, isn't it? We can't make any promises now, can we, babe, but link in bio for Kim's possible peace offering. (📷: Getty Images)
A post shared by E! News (@enews) on Jan 18, 2019 at 6:29pm PST
အခုတော့လည်း Kim ဟာ Taylor နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သူမရဲ့ ရင်ထဲက သဘောထားအမှန်ကို ထုတ်ပြလိုက်သလို ဖြစ်နေတာပါ။ သဘောကတော့ မီးစိမ်းပြလိုက်တာမျိုးပေါ့။ ဒါပေမဲ့လည်း အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ် ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Taylor ကတော့ အခုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆိုးတာတွေ၊ ကောင်းတာတွေ ဘာမှ မတုံ့ပြန်သေးဘူးလို့လည်း သိရပါတယ်။ ။
PREVIOUS POST Previous post: နှလုံးသားလှတဲ့ Justin Timberlake
NEXT POST Next post: ပဲရစ်မြို့ကို ရောက်တုန်းရောက်ခိုက်မှာ မုဒိမ်းမှုနဲ့ ဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့ Chris Brown